२०२६ पुष १७ गते २१:४६
काठमाडौं, ३ साउन । अभिनेत्री श्वेता खड्का माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको ब्रान्ड एम्बासडर नियुक्त भएकी छिन् ।बैंकले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धनका लागि अभिनत्री खड्कालाई एम्बासडर नियुक्त गरेको हो । माछापुच्छ्रे बैंक लाजिम्पाटमा आयोजित एक कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला तथा नायिका खड्काले सझौतापत्रमा हस्ताक्षर...
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा कारोबार हुँदैछ ?
२०२६ पुष १७ गते १९:१३
काठमाडौं, २ साउन । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको भाउ घटेको छ । नेपाली बजारमा आज (शुक्रबार) सुनको भाउ तोलामा ५ सय रुपैयाँ घटेर तोलाको ९२ हजार २ सय रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुनको भाउ १२ डलरले घटेको...
फेरी बढ्याे सवारी साधन कर, कुन सिसिको कति ?
२०२६ पुष १७ गते १७:३१
काठमाडौं, १ साउन । सरकारले आ.ब. २०७७/७८ को लागि तोकिएको करको दर आजदेखि लागु हुने गरि परिवर्तन गरेको छ । आजदेखि लागु भएकाे करकाे दरमा सिसिअनुसार दर फरक-फरक रहेकाे छ । जसमा १२५ सिसिसम्मका सवारी साधनकाे वार्षिक कर रु. २८०० ताेकिएकाे छ । त्यसैगरि...
२०२६ पुष १७ गते १३:१८
काठमाडौं, १ साउन । बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा एक सय रुपैयाँले घटेको छ । प्रतितोला एक सय रूपैयाँले घटेर बिहीबार ९२ हजार ७ सय रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । बुधबार छापावाला सुन प्रतितोला ९२ हजार ८ सयमा कारोबार भइ...
२०२६ पुष १७ गते २२:५४
काठमाडौं, ३१ असार । आम्दानीको दाँजोमा सञ्‍चालन खर्च बढी भएको कारण देखाउँदै नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानमा रहेका ६ वटा चिनियाँ जहाजलाई हटाउँदै नयाँ जहाज खरिद गर्ने भएको छ । चिनियाँ एक्जिम बैंकको ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण तथा अनुदानमा ०७१ असारमा...
२०२६ पुष १७ गते २२:४१
काठमाडौं, ३० असार । सोमबार अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य कायम भएको सुनको मूल्य आज फेरि केही रुपैयाँले तल झरेको छ । सोमबार प्रतितोला ९२ हजार ३०० मा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज सय रुपैयाँले घटेर ९२ हजार २०० मा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल...
बढ्यो सुनको मूल्य यस्तो छ
२०२६ पुष १७ गते १८:४२
असार, २९ काठमाडाैँ । पछिल्लो पटक नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा उच्च बृद्धि भएको छ । प्रतितोला दुई सय रुपैयाँले सुनको मुल्य बढेको छ । छापावाल सुन सोमबार प्रतितोला ९२ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिन...
२०२६ पुष १७ गते १३:३६
काठमाण्डौँ, २८ असार । लगातार क्रमिक रुपले बढ्दै आएको सुनको भाउ हप्ताको पहिलो दिनमा तोलामा १ सय रुपैयाँ घटेको छ । सुन आज तोलामा ९२ हजार १ सय रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासघले जनाएको छ । अस्ति शुक्रबार सुन तोलामा ९२ हजार २...
२०२६ पुष १७ गते ११:०९
काठमाण्डौँ, २७ असार । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर रू. १ ले बढाएको छ । निगमले बढाएको मूल्यपछि अब काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रू. १०२ पर्नेछ । त्यस्तै डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर रू. ८८ पर्ने भएको छ ।...
सुनको भाउ अहिलेसम्म कै उच्च ! कति पुग्यो ? तोलामा हेर्नुहोस
२०२६ पुष १७ गते १०:२८
काठमाण्डौँ, २६ असार । आज बिहिबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्य बढेको छ । आज सुनको मुल्य तोलामा ९ सयले बढेको हो । बुधबार ९१ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य बिहीबार ९ सयले बढेर ९२ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी...